Depiote R. Nicolas : « Tsy ekena ny fidinana an-dalambe » | NewsMada
Depiote R. Nicolas : « Tsy ekena ny fidinana an-dalambe »
« Tsy azo ekena intsony ny fidinana an-dalambe sy ny fitokonana. Mampihemotra antsika izany ary tsy misy tombontsoa ho an’ny vahoaka sy ny firenena. Ampy izay. Fantatra fa ireo malahelo seza sy manimanina ny tongolon’i Ejypta ireo mbola mivoy sy te hanao izany eto. Aoka tsy horebirebena amin’izany intsony ny vahoaka », hoy ny depiote Randrianasolo Nicolas, omaly tetsy Antaninarenina. Nohitsiny fa tsy azo ekena intsony ny hiverenan’ny krizy eto indray.
Momba ireo fihetsiky ny mpanao politika sasany tato ho ato indray, nambarany fa efa teo avokoa izy ireo. Anisan’izany ny filoha teo aloha, Ravalomanana, sy ny loholona Lylison. « Inona no mba nataon’izy ireo ho an’ny firenena ? Andraso ny fotoana ary avelao hiasa ny fitondrana », hoy ihany izy.
Noresahiny koa ny mety hanovana ny governemanta sy ny praiminisitra. Tsy niolaka ity depioten’i Betroka ity nilaza fa tompon’ny teny farany ny filoha Rajaonarimampianina. « Tokony ho efa novana taorian’ny fijoroan’ny Antenimierandoholona io. Tsy atao fahatany anefa izany nefa koa tsy hatosika hiroso amin’izany ny filoha », hoy ihany izy.